Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Galkacyo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Galkacyo
Madaxweynaha Galmudug oo u ambabaxay Galkacyo
January 12, 2018 admin674
Madaxweynaha Dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo wafdi la socda ayaa goordhow ka ambabaxay Magaalada Cadaado Xarunta kumeelgaarka Galmudug oo uu shalay soo gaaray. Wafdiga Madaxweynaha ayaa ku wajahan Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa Galkacyo u tagaya sidii u soo dhaweyn lahaa Madaxweynaha Qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la filayo in saacadaha soo socda uu soo gaaro halkaas.
Axmed Ducaale oo saaka shir la yeeshay waxgaradka Cadaado ayaa fashil ku soo dhamaaday, Waxaana dhacday in ciidamo ka tirsan Daraawiishta Galmudug ay jidgooyo u dhigeen Albaabka Madaxtooyada inkastoo aysan dhib ka dhicin hadana arintaas ayaa u muuqatay gadood ciidanka dhexdiisa ah.
Dhanka kale Shirkii Hotel Central magaalada Cadaado uga socday waxgaradka Cadaado ayaa soo idlaaday, waxaana ka soo baxay in Banaanbax nabadeed ay dhigaan bulshada cadaado, banaanbaxaas oo looga soo horjeedo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Sidoo kale Waxaa Cadaado ka socda abaabulka Banaanbax looga soo horjeedo Madaxweyne Farmaajo, iyadoo bulshada Cadaado saluugay in Madaxweynuhu Cadaado joogi doono kaliya 2 saacadood, taas oo ay u arkaan in aysan mudneyn.
wixii kusoo kordha wararkaan kala soco ceelhuur.com
Shirkii Xaaf iyo Reer Cadaado oo fashil ku dhamaaday
Daawo: Banaanbax looga soo horjeedo Farmaajo oo Cadaado ka dhacay
Nin Xaaskiisa ku gowracay magaalada Guriceel
Aqriso: Tirsigii 54aad ee Wargeyska Gobollada Dhexe Sebtembar 2017